All ụzọ gị mkpa mara ịzọpụta / ndabere iTunes gị ọbá akwụkwọ
Ọ bụ mgbe niile mma na-ọhụrụ backups nke gị faịlụ maka ihe ọ bụla na kọmputa ọrụ. Otu bụ ikpe na iTunes. A azụ elu bụ kpọmkwem mkpa n'ihi na mgbe ị na-eche banyere ego i nyekwara ke gị ngwaike na software gị na akpaghị aka-aghọta na ị mkpa ichebe gị idoziri.
Ịmepụta iTunes site ọkọ mgbe a ojiji nke ezi a mgbe onye ọ bụla nke si kasị njọ nro. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye ga-mgbe niile kwadebe maka ndị kasị njọ, ị ga-enwe a ndabere gị software. E nwere ọtụtụ ụzọ nke akwado iTunes Libraries ma n'otu oge ị kwesịrị ijide n'aka na ị na-ndabere song Fim, play adabere.
Method 1: Ịchekwa iTunes na Mpụga mbanye / Apple ngwaọrụ site na TunesGo
Usoro 2: Zọpụta gị iTunes Data ọzọ kọmputa
Method 3: Ichekwa ndabere gị data site Burning CD / DVD
Otu ihe dị mkpa na omume nke bụ tinye n'ọrụ kpamkpam na iPhone bụ iTunes. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke a karịsịa software, ọ bụ a metụtara nanị akụkụ ụfọdụ omume n'ime ekwentị gị na-enye gị ibudata ngwa ọdịnala na music. Mgbe ị na-eji iTunes, software locates gị Oghere Usoro ọgụgụ iji hụ na kwesịrị ekwesị ngwaọrụ a ka na-eji.
Iji na-eso iji chọta gị Oghere Usoro ọgụgụ iji iTunes:
Nzọụkwụ 1. Malite site syncing na iTunes Ndetuta egwu ọkpụkpọ na ị chọrọ iṅomi na mpụga ike mbanye na onye ọ bụla nke gị na iOS ngwaọrụ. Mkpa ka ị jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na-emeghe iTunes. Ọ dịghị enweta na View na mgbe ahụ Gosi sidebar. Enweta na gị iOS ngwaọrụ na ekpe sidebar na-aga Music taabụ n'elu nke mpio. Họrọ listi ọkpụkpọ na ị chọrọ ka mmekọrịta na-amalite na syncing ha gị iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Kwụsịkwanụ iTunes mbụ na mgbe ahụ, ị pụrụ nanị na-agba ọsọ MobileGo n'ihi na gị iOS na akụrụngwa gị. TunesGo na-aga na-aghọta gị iphone ma na-ewetara ya na gị na isi window. Otu ihe aha ya bụ dị ka "Playlist" ga na-ahụ gị.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a, i nwere ike iṅomi ndị "playlist" ikpughe niile iTunes nke i synced na gị iOS usoro. Na-ahọrọ ndị chọrọ listi ọkpụkpọ na họrọ triangle n'okpuru Export na. Ị nwere ike họrọ "Mbupụ na My Computer." Zọpụta ndị a listi ọkpụkpọ na mpụga ike mbanye na ị na plugged na gị na kọmputa.
iTunes ejikari-azọpụta gị ebudatara ma ọ bụ zụrụ stof na a iTunes nchekwa na kọmputa gị. Ị nwere ike mfe ikwunye n'ime ihe mpụga ike mbanye ma ọ bụ ọbụna a USB mbanye na a na kọmputa na ịgbanwee iTunes n'ime ya. Otú ọ dị, ị na-enwe na nhọrọ nke na-azọpụta a data jidesie ọzọ na kọmputa site na TunesGo.
Nzọụkwụ 1. launching usoro ihe omume
Nzọụkwụ 2. Copy iTunes a mpụga Apple ngwaọrụ
Mkpa ka ị pịgharịa gaa na "playlist" ke hapụrụ kọlụm. Nke a na-ewetara gị ihu na ihu a set nke nhọrọ n'akụkụ aka nri. Enweta na "Tinye" nhọrọ, nke a ga-emeghe a dobe ala menu. Niile nke gị listi ọkpụkpọ ga-akpaghị aka na-enyocha, ma ị nwere nhọrọ nke unchecking ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ụfọdụ n'ime ha. Enweta na "OK" na a usoro ga-ebute usoro nke Iṅomi site na otu ngwaọrụ ọzọ.
Nzọụkwụ 3. jikọọ na ngwaọrụ na ọhụrụ gị na Computer
Nzọụkwụ 4. Export data gị PC ma ọ bụ iTunes n'ọbá akwụkwọ.
I nwekwara ike ile a ndabere gị data site na-ere ọkụ a CD / DVD. Otu n'ime ndị isi uru nke usoro a bụ na ị nwere ike ịnweta gị video / ọdịyo faịlụ obula na ị chọrọ mgbe ọ bụla igwe ma ọ bụ na laptọọpụ. Ọ bụkwa ihe n'ụzọ dị mfe na-a ndabere. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ahọrọkarị tumadi n'ihi nke na-ewe oge usoro nke na-ere ọkụ na CD / DVD. Nke abuo, dabere na size gị ọbá akwụkwọ, ọnụ ọgụgụ nke CD ị nwere ike ịchọ nwere ike ịbụ na otu narị otu narị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọrụ ọkụ CD ha iTunes n'ọbá akwụkwọ dị ka a azụ-elu bụrụ na OS Nwela jiri.
Ị pụrụ ịgbaso nyere nzọụkwụ na-aga banyere usoro a.
Nzọụkwụ 1. Ke akpa ị nwere na-emeghe iTunes ngwa na gị isi na kọmputa. Ugbu a imepụta egwu ọkpụkpọ nke ọdịyo faịlụ ị chọrọ ke gị CD
Nzọụkwụ 2. Burning disk. Ozugbo ị na-eme na hotara na mbụ nzọụkwụ, enweta na "mere," na mgbe ahụ ịnyagharịa Njikwa na pịa Ọkụ Playlist disk.
Nzọụkwụ 3. Nke a ga-ewetara gị ihu na ihu a window aha ya bụ apa ọkụ ntọala. Họrọ gị disk burner ugbu a.
Nzọụkwụ 4. Ị nwere ike ịhọrọ ọsọ nke ị na-achọ ọkụ nke CD. Nke a ga-ekpebi oge nke ha ga-na-enwu.
Nzọụkwụ 5. Fanye ide CD na disk mbanye. Họrọ nhọrọ "na-emeghe na iTunes," na-ere ọkụ malitere. iTunes ejikari na-egosi na ọganihu na n'elu nke ngwa window.
iTunes Library analyzer - Tụlee iTunes Library ka chaatị dị iche iche
> Resource> iTunes> All ụzọ zọpụta / ndabere iTunes Gị Library